[Umbono] I-E3 ebhekwe kakhulu yizinkampani uqobo | Izindaba zamagajethi
UMundi Videogames | | Imicimbi
Sivele sishiye emuva i-E3 ka-2012 nango-2013, amabili kulawo maqembu emidlalo yamavidiyo athembisa ukubeka ibha phezulu kakhulu ngokomdlandla nokulindela okwenziwe. Futhi bekungekhona okungaphansi: kokunye i-protagonist bekuyi-Wii U, i-Nintendo console entsha bese kuthi enye kube yi-Playstation 4 ne-Xbox One edonse amehlo. bona ukuthi konke kuphefumulelwa kanjani emvelweni ngaphandle kwalokhu okungaqondakali okufanele kutholakale ekuqaleni kwesizukulwane esisha sezinduduzo nakho konke okubandakanya: imidlalo emisha, izingxenye ezingcono zobuchwepheshe, okuhlangenwe nakho okusha, njll.
Ngalesi sizathu nangezinye izizathu ezisindise izingqinamba ezinjengentengo eyeqile ye-Wii U, izinqubomgomo, okwakungumdlandla kakhulu kumsebenzisi ku-Xbox One nokushoda kwemidlalo esezingeni eliphakeme ekhethekile ezingeni elijwayelekile, I-E3 yalo nyaka iphinde futhi, ngokuhle noma ngokubi, okulindeleke kakhulu eminyakeni yamuva futhi, maqondana nezinkampani, abaswele kakhulu. Futhi yilokho IMicrosoft, iSony neNintendo, ngayinye enezimo zayo futhi zonke zisezimweni ezingathuthuka, zidinga ukudala ukukhanga nokwenza iningi lomphakathi, ngaphesheya kwe- abamukeli bokuqala, bafuna ukuthenga i-console yabo ngombukiso wokuthi, ngaphandle kwezimemezelo eziningi zangaphambilini nokuvuza, kuhlose ukuba ngomunye ophelele kakhulu eminyakeni yamuva.
Nintendo Yiyo enenzuzo ngokwesikhathi emakethe ngakho-ke, ngokulandela umqondo kanye nokulandela isibonelo se-Wii, kungaqondakala ukuthi ibisekhanda, futhi ngaphandle kwezinkinga eziningi, ematafuleni okuthengisa . Ngakho-ke a hardware ephelelwe yisikhathi, isiphakamiso esihlulekile ukuhlukanisa noma ukwenza umphakathi uhehe okwenza iWii yaba enye yeziduduzo ezithengiswa kakhulu emlandweni futhi, ngaphezu kwakho konke, ukushoda kwenhlokodolobha enkulu kaNintendo, imidlalo yayo, yenza iWii U ibe yimbi kakhulu kuneGamecube eyake yaba khona, ukwehluleka kwezentengiselwano okwaziwa kakhulu kweBig N.
Kulo nyaka, futhi, umkhiqizo ophethwe nguSatoru Iwata usekela i- isethulo sevidiyo, ngesitayela seqiniso seNintendo Direct, njengoba benzile ngonyaka odlule. Kuyahlekisa ukuthi, lapho bedinga ukukhiqiza intshisekelo nesasasa elingaphezulu, abayinaki imiphumela yengqungquthela ebukhoma. Yiba noma kanjani, ukwethulwa kwe- Umngcele omusha weThe Legend of Zelda kokudingekayo futhi ikuwo wonke amachibi angaphezulu kwezinye izimanga inkampani enikezayo: iMetroid entsha? Ukubuya kwe-StarFox? IMiyamoto isebenza nge-IP entsha? Retro Studios ekusizeni? Ngezifundo, i-trajectory kanye nenombolo yezakhiwo zengqondo, kusobala, ngeke kube njalo. Kusazobonwa ukuthi ngabe uNintendo uyayethemba ngempela i-Wii U futhi uyakufakazela lokho. Ngakolunye uhlangothi, kusobala ukuthi ukwesekwa kwe-3DS kuzoqhubeka nokugqama njengale minyaka embalwa edlule, kunikeze ikhathalogi engaphezu kokumangazayo.
Microsoft, ngakolunye uhlangothi, ifika ku-E3 ngemuva kwamasonto ambalwa aphikisanayo. Ngemuva kokugxekwa okunamandla nokwedlulele ngemuva kokumenyezelwa ngokusemthethweni kweXbox One, inkampani yaseRedmond yahlehla kuyo yonke leyo migomo ebuzwa ngokuqoqwa kwayo ngentela ngokweqile nokubukeka kwayo okuyisidlakela futhi, ukuxoshwa noma ukusula emsebenzini, uDon Mattrick, inhloko ebonakalayo ye-Xbox division, wagxuma umkhumbi. Manje, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, uPhil Spencer, inhloko entsha yalesi sigaba, umemezele i- isinqumo sokususa uKinect (ingxenye eyake yaba yisisekelo futhi engahlukaniseki yesipiliyoni se-Xbox) inikeza, futhi, ukubuyela emuva maqondana nefilosofi yayo.
Ngaphezu kwalokhu, esikhathini esichithwe noPhil Spencer ekuholeni, abadlali babe nenhlanhla yokubona ukuthi umphathi wesigaba ubheja emidlalweni yamavidiyo njengomongo oyinhloko kokunye okuqukethwe komphakathi kanye nemultimedia. Ziyaziwa izethembiso zabo ze-E3 ezobhekana "nemidlalo, imidlalo neminye imidlalo" futhi asebevele bakhanyisa umthwalo wabo ngokumemezela ngokusemthethweni IHalo 5: Ababheki kanye neForza Horizon 2, hhayi imidlalo emincane ncamashi. IMicrosoft isengozini kude nePlaystation 4 kumanani ezimakethe, ngakho-ke futhi idinga ukuvuselela ukuthengisa kwayo kwe-console. Isinyathelo sokuqala, € 100 isaphulelo ukufanisa amanani, kunikezwa; manje sidinga okubalulekile kithi sonke: "imidlalo, imidlalo neminye imidlalo." Ngaphezu kokusetha izinsuku ze-Fable Legends, i-Quantum Break ne-Sunset Overdrive, uma ubheka ama-Gears of War amasha futhi, ngethemba lokuthi, ukwazi ukubona i-IP entsha, kungaba yi-push engaphezulu (futhi edingekayo). Ngabe bazowukhumbula umphakathi waseJapan?
Ekugcineni, kuza ngohlobo olungcono kodwa hhayi olufanele, kuza Sony nge-Playstation 4 ne-PS Vita. Lo mzuzwana ubulokhu ungawunaki futhi iminyaka embalwa lapho ubushoda kakhulu ngamathemba okuthi ukusekelwa okukhulu okuvela kumkhiqizo waseJapan awutholakali ngokwedlula izihloko ezithile ukuthengwa okuphambene nentambo entsha yemisebenzi emincane ezimele.
I-Playstation 4, okwamanje, iyikhonsoli yesizukulwane esisha ethengiswa kakhulu kunazo zonke ngenxa yesilinganiso samandla wehadiwe / intengo engcono kakhulu yalaba abathathu. Kepha kunjalo ikhonsoli esele emuva uma sikhuluma ngezihloko ezikhethekile obani labo, ngemuva kwakho konke, abakhona ukungalingani ibhalansi ekuphishekeleni uhlobo oluthile lomkhiqizo. UKnack noKillzone: IShadow Fall, sekucacile, yiminyango nje ekude kakhulu nezici ezinkulu zobuhlakani benkampani efana noNkulunkulu Wempi noma Ongafundile. I-Logic ithi kungenzeka sazi okuthe xaxa ngalokhu kokugcina nangesitolimende sesine, kepha akukho okunye esikwaziyo mayelana nekusasa eliphethe abanikazi be-Ps4. I-Order: 1886 kanye neDrayivu, obekufanele ifike ngaphezu kwengxenye yonyaka edlule, bazoba lapho ezinyangeni zokugcina zonyaka. Kepha uma ubheka umncintiswano, kuyacaca ukuthi iSony idinga ukwengeza amabutho amaningi kwifayela le- ikhathalogi nayo ishaqile okwamanje. Ingabe uzobona okusha eSanta Monica? Ngabe Kusuka Ku-Software Bean rumored Project Beast kuzoba yiqiniso?
Ngamafuphi, selokhu isizukulwane esisha okwase kuyisikhathi eside silindelwe sangena emigwaqweni, umuzwa ovelele owokushoda kwezihloko ezikhethekile nezidonsa amehlo, ukuhlukunyezwa kwentuthuko yezizukulwane kanye nokuxhashazwa ngqo kwalelo khono lobuchwepheshe esalithenjiswa lona. Leso sikhathi sonyaka sisondela, siklwebha ihlobo, lapho sekuyisikhathi sokuba ngumntwana futhi, siphinde sijabule futhi siphile ngomdlandla izindaba zomhlaba. I-E3 iyeza, ngicela ujabule.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Imicimbi » [Umbono] I-E3 edingeka kakhulu kunanini ngaphambili
Qedela uhlelo lwe-E3 2014